Archive du 20181011
Marc Ravalomanana « Hamoraina ny fananan-tany ho an’ny Malagasy »
9 taona no niandrasako, niandrasanao ity fifidianana ity. Kihon-dalana ho an’ny tantara izao, ka mahaiza misafidy, hoy i Marc Ravalomanana raha nitsidika ny tapany avaratra andrefan’ny nosy iny omaly dia tao Port Bergé sy Ambanja.
Antoko H E Mada « Mampihomehy ny raharaham-pirenena ! »
Mampihomehy ihany indraindray ny raharaham-pirenena, hoy ny filohan’ny antoko H E Mada, Toavina Ralambomahay. Eto Madagasikara irery no misy kandida sady manao propagandy no mangataka fanemorana fifidianana.
Kandida 22 mamondron-kery Tsy hanolotra kandida iray mandrakizay, hoy Jean Nirina R.
Niteraka resabe teto amintsika tato ho ato ilay famondronan-kery tanterahin’ireo kandida miisa 22 manoloana ny fiatrehana ny fifidianana ho filoham-pirenena.
Antenimieram-pirenena Ahiana hifangaro ny asa sy ny fampielezan-kevitra
Hiditra amin`ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimieram-pirenena etsy Tsimbazaza ny talata 16 oktobra ho avy izao. Mbola olana hatrany anefa ny firotsahan-kofidian`ny filohan`ny antenimieram-pirenena, Jean Max Rakotomamonjy, amin`ny fifidianana filoham-pirenena izay hatao amin`ny 7 novambra.
Vahoakan’ny Boriborintany faha-6 Hampandany an-dRavalomanana
Diabe miainga tao amin'ny QG Antanety Sud no nataon'ireo vahoaka mpanohana ny Kandida N°25 Marc Ravalomanana nihazo ny tapany andrefan'Ambohimanarina omaly 10 oktobra tolakandro, ka fokontany maromaro no nolalovana sy nampahafantarana ny programman'asa, izay voarakitra ao anatin'ny MAP2.
Amin`izao ankatoky ny fifidianana izao dia hizingizinina fa zo sy adidy no mifidy.
Filoham-pirenena vaovao Mila miomana amin`ny fifidianana solombavambahoaka
Ny 25 janoary 2019 no tetiandro voafaritra ao anatin`ny lalàmpanorenana andraisan`ny filohan`ny Repoblika vaovao ny fitantanana ny firenena. Maro ny asa hiandry azy rehefa tonga eo amin`ny fitondrana.
Fiara tsara sy matanjaka Tsy zakan’ny Malagasy intsony ny fanafarana
Nampahafantarina tetsy amin’ny Hotely Telozoro Andrefan’Ambohijanahary omaly talata 09 oktobra ny hetsika meeting VW Mada Andiany faha-5 izay hatao ny sabotsy 13 oktobra ho avy izao manomboka
Andro Iraisam-pirenena ho an’ny ankizivavy Anio no hanokafana ny lalao baolina kitra vehivavy sokajy U 16
Homarihana ao anatin’ny fanohanan’ny Unicef ny Baolina kitra vehivavy sokajy U 16 karakarain’ny FMF eny amin’ny kianjan’i Carion ny 12-20 oktobra 2018 izao ny andro iraisam-pirenena ho an’ny ankizy vavy izay hankalazaina isaky ny 8 oktobra isan-taona. Anio alakamisy 11 oktobra tolakandro eny amin’ny kianja
Karate - Tompondakan’ny Ligin’Analamanga Handraisan’ireo seksiona 7 anjara amin’ny alahady izao
Hanatontosa ny fiadiana ny ho tompondaka ao aminy amin’ny alahady 14 oktobra izao etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ny ligin’ny karate eto Analamanga izay hivondronan’ny seksiona 7 (Antananarivo Renivohitra, Atsimondrano, Avaradrano, Anjozorobe, Ankazobe,
CNaPS Sport tantanan’i Raoul Arizaka Rabekoto Nanome ainga vao ny baolina kitra Malagasy
I Njiva Rakotomalala fantatry ny maro kokoa amin’ny hoe Njiva no nampiditra ny baolina tokana teny Vontovorona teo amin’ny minitra faha-42 ny talata lasa teo ka nahazoan’ny Barea ny tapakila hiatrehana ny CAN 2019 any Cameroun amin’ny herintaona.
Mihodina ny tany
Mety hahatsikaiky ny mahita olona mametaka peta-drindrina kandida iray kanefa manao fanamiana kandida iray hafa. Mety misy ho sorena koa anefa rehefa mahita tranga toy izany.
Famarotana Antibiotika Nohenjanina ny fanarahamaso
Nandray fanapahan-kevitra omaly ireo farmasiana mivondrona ao anatin’ny fikambanan’ny farmasianina eto Madagasikara tarihin’ny dokotera Mora Edwine manoloana ny firongatry ny fihinanana antibiotika eto amintsika.
Miakatra an-tanàna ny ranomasina ao Morondava hatramin’ny afak’omaly. Izany dia noho ny firotsahan’ny orana be loatra tamin’ny alatsinainy alina teo.
Notontosaina tetsy amin’ny oniversiten’Antananarivo omaly ny fanokafana ilay hetsika mitondra ny lohateny hoe « Université de la démocratie sociale.
Mandrosoa Faravohitra Notoloran’ny kaominina fanampiana ireo traboina
Tsy nanadino ireo traboina vokatry ny hain-trano nitranga tao amin’ny fokontany Mandrosoa Faravohitra ny herinandro lasa teo ny Kaominina Antananarivo Renivohitra omaly,
Famotsiam-bola Andrasana ny fandaniana ny lalàna
I Madagasikara dia efa ela no nanasonia ny fifanarahana mahakasika ny fanenjehana famotsiam-bola.